Ikhabhathi yeLog yabucala enesauna
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguAnniki
Indlu ye-log yaseMarina yindawo efanelekileyo yabahambi abahamba bodwa, izibini ezitshatileyo okanye iqela elincinci labahlobo abathanda ukuchitha iholide ezolileyo emaphandleni kunye nokuhamba ngeenyawo kwindalo.
Obona bunewunewu bukhulu apha bubucala kunye nendalo.
Indawo yogcino lwendalo yaseNigula kunye neendlela zokuhamba intaba yi-12km ukusuka endlwini, iinqaba zokujonga intaka zaseKabli 30km.
Unokonwabela ukuqubha kunye nokuloba (i-pike, i-perch kunye ne-roach ziintlanzi eziqhelekileyo apha) kwichibi labucala.
Idama lisecaleni kwendlu, apho unokuqubha ngokukhawuleza emva kwe-sauna.
I-Marina Log House yindawo yokuhlala esisiseko kakhulu kumntu othanda indalo ofuna ukufumana ubomi basemaphandleni ase-Estonia njengoko babuphila kumashumi eminyaka eyadlulayo - akukho manzi abalekayo endlwini, kuya kufuneka uzise amanzi abandayo echibini ngaphandle kwaye ulifudumeze xa ufudumeza sauna.
Obona bunewunewu bukhulu apha yindalo kunye nobumfihlo.
Indawo yekhitshi inezinto eziluncedo ezisisiseko- kukho ifriji, isitovu sombane esisetafileni, iketile kunye nezinto ezisetyenziswa etafileni.
Kumgangatho wesibini kukho indawo evulekileyo yokulala. Kukho ibhedi enye ephindwe kabini kunye noomatrasi ababini bomgangatho owongezelelweyo onokusetyenziswa.
Iingubo kunye nemithwalo ziyafumaneka kwiindwendwe ezi-4 - ukuba unenkampani eninzi, nceda uqhagamshelane nam ngaphambi kokuba ubhukishe.
Nceda uqaphele ngaphambi kokubhukisha:
! Akukho manzi aphuma endlini. Yiza namanzi akho okusela.
! I-Eco-toilet ifumaneka ngaphandle.
! Yiza nelinen yakho yokulala/iingxowa zokulala kunye neetawuli.
Le yindawo apho ungahlala udibana nezilwanyana kwindawo yazo yendalo. Iparadesi yeebhiva inokubonwa ecaleni komlambo okufuphi; amaxhama, iihagu zasendle kunye neempungutye ngabatyeleli rhoqo kumasimi akufutshane.
Sabelana ngayo yonke into enikezelwa ngummandla-ehlotyeni ungakha amaqunube asendle emva kwendlu yelog kwaye igadi izele yimithi yama-apile.
Emahlathini ekwindla anika amaninzi amakhowa, i-blueberries, i-cranberries kunye ne-hazelnuts.
Akukho bamelwane kufutshane, ngoko ungakonwabela ukuba bucala. Eyona lali ikufutshane (iTali) enevenkile yokutya kunye neposi ikumgama oziikhilomitha ezi-5.
Ikomkhulu lase-Estonia lasehlotyeni i-Pärnu yi-42km ukusuka kwipropati.
Umbuki zindwendwe ngu- Anniki
Ndisendlini kwiiyure ezimbalwa ngaphambi kokuba ufike, ukuyitshisa kwangaphambili ukwenza ukufika kwakho kube lula kangangoko.
Ukuba andikwazi ukuba lapha, uya kufumana imiyalelo yokuthatha isitshixo.
Ukuzihlola ngokwakho kunokwenzeka.
Ungasoloko undifowunela ukuba ufuna naluphi na uhlobo loncedo.
Ukuba andikwazi ukuba lapha, uya kufumana imiyal…